Asan-jiolahy :: Misesisesy ny fanafihana mitam-basy any Tsiroanomandidy • AoRaha
Niharan’ny fanafihan-jiolahy ny tokantrano iray tany Antranoroa-Tsiroanomandidy renivohitra, tamin’ny alin’ny alahady lasa teo. Mampiasa basy ka mitifitra ireo jiolahy. Vola roa hetsy ariary, fakantsary iray sy finday roa no lasan’izy ireo. Mihorohoro amin’ny afitsoky ny jiolahy mitam-basy ny mponina ao an-tampon-tanànan’i Tsiroanomandidy.
« Nidiran’ireo jiolahy maromaro ilay tokantrano, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina. Sady mitifitra izy ireo no mamaky trano ka tsy nisy nahasahy nivoaka ny mponina manodidina. Vetivety dia lasa ireo jiolahy rehefa nahazo vola tao amin’ilay lasibatra », hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Tonga teny amin’ny toerana nisehoan’ny asa ratsy ireo mpitandro filaminana polisy sy zandary, saingy tsy nahatratra ireo jiolahy intsony. « Mitaraina izahay fa mirongatra ny asan-jiolahy eto Tsiroanomandidy renivohitra. Tsy misy herinandro ka tsy ahenoana fanafihana mitam-basy eto. Tato ho ato aza dia saika isan-kalina no misy asan-jiolahy aty aminay. Miantso ny lehiben’ireo polisy sy zandary izahay handray andraikitra fa mandry tsy lavo loha ny mponina aty », hoy Randriamahefa Nivoson, mponina any Tsiroanomandidy.
Fihoaram-pefin’ny toeram-pisotroana :: Vehivavy nosamborin’ny polisy teny 67Ha
Ady amin’ny halatr’omby :: Mpimasy roa voasambotra